पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डपत्‍नी सीतालाई उपाचारका लागि भारत लगियो « Sajhapath.com
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डपत्‍नी सीतालाई उपाचारका लागि भारत लगियो
काठमाडौं पुस २० । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पत्नी सीता दाहाललाई थप उपचार गर्न सोमबार भारत लगिएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सको बिहान ११ बजेको उडानबाट दाहाललाई मुम्बई लगिएको प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए । सीतासँगै अध्यक्ष प्रचण्ड र छोरी गंगा दाहाल पनि मुम्बई गएका छन् ।
सीताको उपचार न्यूरोजेन ब्रेन एण्ड स्पाइन इन्सटिच्युटमा हुने छ । उनलाई सो अस्पतालका डाइरेक्टर तथा कन्सलट्यान्ट न्यूरो सर्जन डा. आलोक शर्माको टोलीले उपचार गर्ने छ ।
प्रचण्डका सीता दाहाल लामो समयदेखि पार्किन्सन जस्तो देखिने एक जटिल प्रकारको रोगले पीडित छिन् । त्यसलाई ‘प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी (पी.एस.पी.)’ भनिन्छ । पछिल्लो समयमा भैसेपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गरी घरमै आराम गरिरहेकी दाहाललाई सोमबार मुम्बई लगिएको हो । सीतालाई यसअघि अमेरिका, सिंगापुर र भारतमा लगेर उपचार गराइएको थियो ।
सीता दाहाल पार्किन्सन जस्तो देखिने एक जटिल प्रकारको रोगले पीडित छिन् । त्यसलाई प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी (पी.एस.पी.) भनिन्छ ।
नेशनल हेल्थ सर्भिस, ब्रिटेनका अनुसार पीएसपी एक दुर्लभ स्थिति हो, जसका कारण मानिसको मानसिक असन्तुलनका साथै हिँड्न, बोल्न र निल्नसमेत कठिन हुने गर्छ । मस्तिष्कको कोशिकामा क्षति हुँदा यस्तो समस्या देखिने चिकित्सकहरु बताउँछन् । छोरा प्रकाश दाहालको असामयिक निधनपछि सीतालाई रोगले झन च्यापेको छ । त्यसैले सीताको मन बहलाउन प्रचण्डले बेला–बेला विभिन्न ठाउँमा घुमाउन लैजान्छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित प्रचण्ड र सीता म्याग्दीको तातोपानी कुण्डमा पुगेर स्नान गरेको तस्बिर समाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । सीताको उपचारकै सिलसिलामा तातोपानी कुण्डमा पुगेको प्रचण्ड परिवारका सदस्य बताउँछन् ।
काठमाडौंको बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालका डा. प्रत्युष श्रेष्ठका अनुसार पीएसपी पार्किन्सनको सबैभन्दा नराम्रो अवस्था हो । रोग यो पूर्णरुपमा निको हुँदैन, रोकथाम गर्न मात्रै सकिन्छ । यसको उपचारविधि भनेको औषधि र अपरेसन हो । औषधिले ठीक नभएमा अपरेसन गर्नु पर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जुन ठाउँमा बिग्रिएर यो समस्या आउँछ त्यो ठाउँमा मुटुमा पेशमेकर राखेजस्तै दिमागमा पनि राखेर उपचार गर्न सकिन्छ ।’
यो रोगको सामान्य उपचार बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पतालमा हुँदै आएको छ । तर, प्रचण्ड पत्नी सीताको समस्या कुन स्तरको हो भन्ने कुरा रिपोर्ट नहेरी भन्न नसकिने उनले बताए ।
पीएसपीको समस्या ६० वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिहरुलाई बढी हुन्छ । बलिउडका चर्चित हास्य अभिनेता कादर खान पनि पीएसपी समस्याबाट पीडित थिए । क्यानडाको एक अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै गत ३१ डिसेम्बरमा ८१ वर्षको उमेरमा खानको निधन भएको थियो । उनलाई सास लिन गाह्रो हुन्थ्यो ।
यसको लक्षण समय अनुसार गम्भीर हुने गर्छ । सुरुवाती चरणमा यसको लक्षण अन्य रोगजस्तै हुने भएकाले यो रोग पत्ता लगाउन मुश्किल हुन्छ । यद्यपि हिँड्न, डुल्न, बोल्न र निल्न कठिन भएमा, लड्छु कि भन्ने डर लागिरहेमा, व्यवहारमा परिवर्तन आएमा, मांसपेशी कस्सिएमा, आँखाको चाल नियन्त्रणमा नरहेमा र स्मरणशक्ति हराउँदै गएमा पीएसपीको शंका गर्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
यसको लक्षण पार्किन्सनसित मिल्दोजुल्दो हुने भएकाले चिकित्सकहरुलाई यो रोग पत्ता लगाउन समय लाग्ने गर्छ । कतिपय अवस्थामा मस्तिष्कको स्क्यान गरेर मात्रै रोग पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यसैले, यो रोग लागेको शंका लागेमा न्युरोलोजिस्टको सहायता लिन सकिन्छ ।
पीएसपीको प्रभावकारी उपचारबारे विभिन्न अनुसन्धान भइरहेको छ । यद्यपि न्यूरो सर्जन र न्यूरोलोजिस्ट मिलेर यसको उपचार गर्दै आएका छन् । सुरुमा औषधि सेवन गर्ने र औषधिले काम नगरे मस्तिष्कको अपरेशन गर्नुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । मुटुमा पेशमेकर राखेजस्तै दिमागमा पनि राखेर उपचार गर्न सकिने न्यूरो सर्जन डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।